dimanche, 17 octobre 2021 12:27
Vondrombahoakam-paritra : Tsy nisy resaka intsony ny amin’ireo fifidianana kaominaly tokony haverina
Maty momoka, tsy nisy resaka intsony hatreto ny amin’ireo Kaominina miisa 24 namoahan’ny Fitsarana didy fa tokony haverina ny fifidianana Ben’ny tanàna miaraka amin’ny fifidianana mpanolontsaina.
120 andro aorian’ny naharaisan’ny ministeran’ny Ati-tany ny fampahafantarana ny didim-pitsarana nanambarana ny vokatra ofisialy ny fifidianana Kaominaly natao tamin’ny 27 novambra 2019 navoakan’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana no voalazan’ny lalàna fa anatanterahana ny famerenana ny fifidianana.
dimanche, 17 octobre 2021 12:19
Amoron'i Mania : Nankalaza ny "Andro iraisam-pirenena ho an’ny zokiolona"
Notanterahina tao Ambositra ny sabotsy 16 oktobra 2021 ny fankalazana ny "Andro iraisam-pirenena ho an’ny zokiolona" ho an’ny Faritra Amoron'i Mania notarihan'i Governora, Ramatoa Mamiarisoa Aline . Lohahevitra ny hoe : "Tsy natao hanilihana ny Zokiolona ny Fahanterana".
Nanamarika izany fanomezana "fanafody", andiany voalohany, ireo ray aman-dreny, izay nitaraina ny amin'ny tsy fahampian'ny fanafody hitsaboana tena sy hijerena ny mikasika ny ara-pahasalaman'izy ireo.